Shangyimm – လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚရွိ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လူအမ်ား ဖတ္ရႈနုိင္ရန္ တဆင့္ျပန္လည္ တင္ဆက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္္။ သုိ႔ပါ၍ ကူးယူေဖာ္ျပခံရေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာေရးသူမ်ားကုိ ေလးစားစြာျဖင္႔ Credit ေပးပါသည္။ မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့Content မ်ားကုိ shangyimm.com တြင္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းအား ကန္ ့ကြက္လုိပါက shangyimm2017@gmail.com သို႕ေပးပုိ ့ကန္ ့ကြက္ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေလးစားစြာျဖင့္…
ပင်မှည့်သီး ကနေ ဒီလို ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်
Posted on September 7, 2021 September 7, 2021 by Shangyi
ပင်မှည့်သီး ကနေ ဒီလို ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ပင်မှည့်သီး ကနေ ဒီလို ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်
Posted on September 6, 2021 September 6, 2021 by Shangyi
ကန်စွန်းဥသည် နွယ်ပင် ပေါင်းပင်အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာပြီး မြန်မာ့သဘောအရဆိုပါလျှင် ကန်စွန်းကြီးမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကန်စွန်းကြီးပင်၏ မြေတွင်းမှ တူးယူရခြင်းဖြစ်သည်။ ကန်စွန်းဥကို သုံးမျိုးသုံးစား ခွဲခြားတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကန်စွန်းဥအဖြူ၊ ကန်စွန်းဥအဝါနှင့် ကန်စွန်းဥခရမ်းရောင်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကန်စွန်းဥတွင် ဗီတာမင်အေ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဘီတာကယ်ရိုတင်းဓာတ်များ မြောက်မြားစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ကယ်ရိုတင်းဓာတ်များ စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ဗီတာမင်အေဓာတ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဓာတ်များမှာ ဗီတာမင်စီဓာတ်၊ မဂ္ဂနီးစ်ဓာတ်၊ ကြေးနီဓာတ်၊ ဗီတာမင်ဘီဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော B1,B2,B6 ဓာတ်များ ပါဝင်ပါသည်။ သတ္တုဓာတ်များတွင် ဖော့စ်ဖရပ်ဓာတ် ပါဝင်သည်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သားသမီးဖြစ်ထွန်းခြင်းကိုလည်း အားပေးစေသည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ရောဂါပြီးစနစ်ကို အားပေးစေ၍ ရောဂါတစ်ခုခုမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။ ရောဂါဖြစ်လျှင်လည်း ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေသည်။
ကျန်းမာရေး အကျိုးပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကန်စွန်းဥစားသုံးခြင်းအားဖြင့် သွေးချိုနှုန်းထားကို ကျစေပါသည်။ ကန်စွန်းဥတွင် ဖိုင်ဘာဓာတ်ပါဝင်သည့်အတွက် အမျိုးအစားနံပါတ်တစ် ဆီးချိုရှိသူသည် ဖိုင်ဘာဓာတ်များစွာ လိုအပ်သဖြင့် ကန်စွန်းဥကို များများစားပေးပါက ဆီးချိုကျနိုင်ပါသည်။ နံပါတ်နှစ်အမျိုးအစား ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များကမူ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျဆင်းပြီး သွေးတွင်းအဆီနှင့် အင်ဆူလင်ကျနိုင်ပါသည်။ အခွံပါသော အလယ်အလတ်ကန်စွန်းဥတစ်လုံးဆိုလျှင် ဖိုင်ဘာဓာတ်ခြောက်ဂရမ်ခန့် ပါဝင်ပါသည်။
ဆားလျှော့စားခြင်းအားဖြင့် သွေးတိုးကျစေခြင်းကို ထောက်ပံ့စေသည်။ သွေးတိုးကျစေရန် ဆားလျှော့စားပြီး ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ပါသော ဟင်းနုနယ်၊ ထောပတ်သီးများကို ပိုမိုစားသုံးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်၌ အမျိုးသားများသည် ဘီတာကယ်ရိုတင်းပါဝင်သော အစားအစာအသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားသုံးပေးပါက ပရော့စတိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်စေနိုင်သည်။ ဘီတာကယ်ရိုတင်းဓာတ်သည် အူမကြီးကင်ဆာကိုပါ ပျောက်ကင်းစေသည်ဟု ဂျပန်လေ့လာသူပညာရှင်များက ပြောကြားသည်။
မြင့်မားသော ဖိုင်ဘာဓာတ်ကြောင့် ကန်စွန်းဥသည် အစာကြေညက်စေခြင်းကို ကူညီထောက်ပံ့စေပြီး ဝမ်းမချုပ်စေဘဲ ဝမ်းပုံမှန်သွားစေပြီး အစာကြေစေပါသည်။
သားသမီးထွန်းကားနိုင်သော အသက်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးတို့သည် သံဓာတ်ပါဝင်သော အသီးအရွက်များနှင့် ဗီတာမင်အေဓာတ်ပါဝင်သော ကန်စွန်းဥကို စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့် မျိုးအောင်စေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ကန်စွန်းဥကဲ့သို့သော စွယ်စုံရအာဟာရတွင် ကိုက်ခဲရောင်ရမ်းမှုကို ကျစေသည်။ ခရမ်းရင့်ရောင် ကန်စွန်းဥသည် နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပြီး ဖရီးရယ်ဒီကယ်များကိုလည်း သုတ်သင်ရှင်းလင်းစေပါသည်။
ဗီတာမင်အေကြောင့် တိမ်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်၍ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်၊ ဗီတာမင်စီနှင့် အီးသည် မျက်စိကျန်းမာရေးနှင့် ညံ့ဖျင်းသော ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ကန်စွန်းဥသည် ဘီတာကယ်ရိုတင်း၏ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် တန်ခိုးထက်မြက်သော အင်တီအောက်ဆီးဒင့်လည်း ဖြစ်သည့်အတွက် ရောဂါဘယများ ပျောက်ကင်းစေသည်။ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါတို့ကို သက်သာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဆုတ်ယုတ်ပျက်ပြားစေခြင်းနှင့် အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းကို နှောင့်နှေးစေပါသည်။ နေ့စဉ် စားသောက်သည့် အစားအစာများတွင် ဘီတာကယ်ရိုတင်းဓာတ်ကဲ့သို့ အစားအစာများ ပါဝင်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါများ ကင်းဝေးကာကျန်းမာသော လူမှုဘဝကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Credit : ထူးထူးမြတ်
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on အာဟာရဖြစ်စေသော ကန်စွန်းဥ
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ထွက်ပြေးတဲ့ လူဉီးရေတော်တော်လေးများပျားလာနေတယ်ဆိုတာ
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စစ်တပ်အင်အား သုံးသိန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အထဲကမှ
အခုဆိုရင် နှစ်ထောင်ကျော်လောက် စစ်တပ်ကို စွန်ခွာထွက် ပြေးတဲ့သူတွေရှိလာနေပြီးဆိုတာကိုလဲ
ပြည်သူ့စစ်သား (People’s Soldiers ) facebook လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာရဲ့ ဖော်ပြချက်များအရ သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်သားအစိုးရ လက်ထပ်မှာတုန်းက အရပ်ဖက်
စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ဖူးသူလဲဖြစ် စစ်ရေးလေ့လာသူ သုံးသပ်သူလဲ ဖြစ်တဲ့
အမေရိကန် အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်က အခုလိုပြောပါတယ်။
“အခုအချိန်မှာ အန်တီတို့အနေနဲ့ လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် မြန်မာစစ်တပ်က အခုချိန်မှာ
ကြာရှည် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်က မလွယ်တော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ CDMတွေလေ တော်တော်များများ
စစ်သားတွေ ထောင်ကျော် CDMကို သွားနေပြီ နောက်တစ်ခု ကြတော့ covidနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြတော့လဲ
သူတို့မှာ သေဆုံးတာတွေရှိမယ်နော် ဘာလို့လဲ ကိုဗစ်က သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ဘူး
နောက်တစ်ခုကြတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ် တိုက်ပွဲတွေမှာလဲ စစ်သားတွေ ထောင်ကျော်
ကျဆုံးတာတွေရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ အခုဆိုရင် CDMကလဲ ပိုပြီးတော့ များလာတယ်။” လို
အခုလို မြန်မာစစ်တပ်ဖက်က တိုက်ပွဲတွေမှာ အကျအဆုံးများနေတာ စစ်တပ်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူတွေများနေတာကြောင့်
ပြည်သူလူထုရဲ့ အကူအညီကို မဖြစ်မနေရယူဖို့ လိုအပ်လာနေတဲ့ အခြေအနေကို ပြနေကြောင်းကို ၎င်းက သုံးသပ်ပါတယ်
ပြည်သူလူထုရဲ့ အကူအညီဆိုရာမှာလဲ G-Zလို လူငယ်လေးတွေကလဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့်
ပူးပေါင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မလွယ်ကူနိုင်တော့ဘူး စစ်တပ်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုလက်မခံ နိုင်ကြတာတင်မကပဲ
နိုင်ငံတကာရဲ့ လက်ခံပေးနိုင်မှုကိုမရရှိတာကို တွေ့မြင်ရကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
ယခု သတင်းကို VOAမြန်မာမှ အမေရိကန် အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်အား
တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့် အချက်အလက်များကို ကိုးကားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted in သတင္း LeaveaComment on မြန်မာစစ်တပ် ရေရှည်ရပ်တည်ရေး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ အမေရိကန် အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ် ပြော
အရေပြားဓာတ်မတည့်မှု (Skin Allergic) ဖြစ်တတ်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့အရာများ
Posted on September 5, 2021 September 5, 2021 by Shangyi
အရေပြားဓာတ်မတည့်မှု (skin allergic) ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ တစုံတခုနဲ့ ထိတွေ့မိပြီး အရေပြားယားယံလာတာ၊ အဖုအပိန့်တွေ ထွက်လာတာမျိုးကို ပြောတာပါ။ တခါတရံမှာတော့ အစားအစာတခုခုကို စားမိရာကနေလည်း အရေပြားဓာတ်မတည့်တာ၊ အစာအဆိပ်သင့်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေအထိ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် skin allergic ဟာ မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်က အရေပြားဓာတ်မတည့်တာမျိုး မကြာခဏ ဖြစ်တတ်သူဆိုရင်တော့ အခုပြောပြပေးမယ့် အရာတွေကို သတိထားရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
မွှေးရနံ့တွေကလည်း အရေပြားဓာတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ရေမွှေးလိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားပေါ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စွတ်ဖျန်းရတဲ့ အခါမျိုးနဲ့ မွှေးရနံ့ပါတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့အသုံးပြုတဲ့အခါ ကိုယ့်အရေပြားနဲပ ဓာတ်တည့်၊မတည့်ကို အရင်ဆုံးစမ်းသပ်ပြီးမှ အသုံံးပြုသင့်ပါတယ်။
မှိုဟာဆိုရင်လည်း စားသုံးမိတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ထိတွေ့မိတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လွယ်တဲ့သူတွေမှာဆိုရင် အရေပြားယားယံတာ၊ အဖုအပိန့်တွေထွက်တာ၊ မူးဝေတာမျိုးတွေအထိ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် သတိထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်က အရေပြား allergic ထတာမျိုး ခဏခဏ ဖြစ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သစ်ပင်၊ ပန်းပင်တွေကြားသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ပန်းပင်တွေ သစ်ပင်တွေက ပန်းဝတ်မှုန်တွေနဲ့ ထိတွေ့ရှုရှိုက်မိတဲ့ အခါမျိုးမှာ နှာချေတာ၊ ရုတ်တရက်အသက်ရှုကြပ်လာတာ နှာရည်ယိုပြီး ယားယံတာ စတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်မို့လို့ skin allergic ဖြစ်တတ်သူတွေအနေနဲ့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ ခွေး၊ ကြောင်စတာတွေရဲ့ အမွှေးတွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အရေပြားဓာတ်မတည့်တာမျိုး ဖြစ်ပြီး ယားယံတာ၊ အဖုအပိန့်ထတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါတိုင်း သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးသင့်ပါတယ်။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on အရေပြားဓာတ်မတည့်မှု (Skin Allergic) ဖြစ်တတ်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့အရာများ
Posted on September 4, 2021 September 4, 2021 by Shangyi
စပါးကြီးသည်းခြေ ( Boa Gallbladder )
စပါးကြီးသည်းခြေက လေဖြတ်လေငန်းရောဂါများအတွက် အထူးဆေးစွမ်း ထက်ပါတယ်။
လျှာကို လေဖြတ်ထားပြီး စကားမပြောနိုင်ပါက စပါးကြီး သည်းခြေဖြင့် လျှာကို ပွတ်ပေးလိုက်ပါက စကားပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်။
စပါးကြီး သည်းခြေကို အသုံးပြုရာတွင် စစ်မှန်သော ပစ္စည်းဖြစ်ရန် အထူးလိုအပ်သည်။
စပါးကြီးသည်းခြေ စစ်မစစ် စမ်းသပ်နည်းတို့တွင် လွယ်ကူသောနည်းတို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အလွန်ထူးခြားသောအချက်မှာ လဆန်း ၈ ရက်များနဲ့ လပြည့်ကျော် ၈ ရက်များတွင် အစို ပြန်လာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
စပါးကြီး သည်းခြေသည် ရေတက်ရက်များ၌ စိုနေတတ်ပြီး .ရေသေရက်များ၌ ခြောက်သွေ့သွားတတ်ပါသည်။
စပါးကြီးသည်းခြေမှာ အသုံးများပြီး အလွန်စွမ်းသည်ဟု ပြောနေကြသောလည်း ရှာဖွေ
တွေ့ရှိရန်မှာ ခက်ခဲသည်။လိုက်လံ ရောင်းချနေသော သည်းခြေများမှာ အစစ်မဟုတ် အတုများသာ ဖြစ်သည်။
အထူးသတိပြုရန်မှာ အစစ် တစ် ခု အတု တစ်ထောင် ဟူသော စကားအတိုင်း ညိူ့ ချက်ကြိုး စသည် ပြည့်စုံစေလျှက် အတုပြုလုပ်ကြသည်လည်း ရှိသည်။
ချိုသော အရသာ အနည်းငယ် ထည့်သွင်းကြသည်လည်း ရှိသည်။ထိုအခါတွင် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ရသည်။
အရသာဖြင့် စမ်းသပ်ရာ၌လည်း အစစ် အချိုနဲ့ အတု အချိုသည် ကွဲပြား ခြားနားမူရှိသည်။ထိုသို့ သတိပြုမှတ်သားပြီး စပါးကြီးသည်ခြေ စစ်မစစ်ကို ခွဲခြားမှတ်ယူနိုင်သည်။
စပါးကြီး သည်းခြေ စစ်မစစ် စမ်းသပ်နည်းများ
၁ ) စပါးကြီးသည်းခြေကို အနည်းငယ် လျှာပေါ် တင်ကြည့်သောအခါ သည်းခြေ တကာတို့သည် စ လယ် ဆုံး ၃ ကြိမ်လုံး ခါးကြသော်လည်းစပါးကြီးသည်းခြေက ဦးစွာခါးသောအရသာကို ရသော်လည်း နောက်ပိုင်း ချိုသော အရသာကိုရသည်။
၂ ) စပါးကြီး သည်းခြေရည်ကို လက်ဖဝါးတွင် သုတ်ထားပါက လက်ဖမိုးတွင် ခါးသော အရသာ ထွင်းဖောက် လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
၃ ) စပါးကြီးသည်းခြေ စစ်မစစ်သိလိုလျှင် သည်းခြေကို သွေး၍ ရေ၌ ချကြည့်ပါ ဝိုင်းပတ်၍ ပြေးလျှင် အတုဖြစ်ပြီး တည့်တည့်ပြေးလျှင် အစစ်ဖြစ်သည်။
သည်းခြေတိုင်း သွေး၍ ရေ၌ထည့်လျှင် ဝိုင်းပတ်၍ ပြေးကြသည် စပါးကြီးသည်းခြေ တမျိုးသာလျှင် တည့်တည့်ပြေးသည်။
၄ ) စပါးကြီးနဲ့ စပါးအုံးလည်း မှားတတ်ပါသည်။
၅ ) အခြားသော သည်းခြေများသည် အခွံထူထဲပြီး အိတ်သဏ္ဍာန် ရှိသော်လည်း စပါးကြီးသည်းခြေကား အလွန်ပါးလွှာသော အခွံ၏ အတွင်း၌ သည်းခြေရည်သည် ပျံ့နှံ၍တည်နေသည်။
၆ ) စပါးကြီး သည်းခြေသည် မည်သည့်အခါမှ သိုးခြင်း ပုပ်ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
စပါးကြီးသည် နှာခေါင်းပေါက် ကိုးပေါက်ပါရှိပြီး စပါးအုံးတွင် မပါရှိပေ။စပါးကြီး အကွက်သည် စိပ်ပြီး တဆက်တည်း ရှိသည်။စပါးအုံးအကွက်သည် ကျဲပြီး တဆက်တည်း မရှိတတ်ပေ
ယခုလိုက်လံရောင်းချနေသော သည်းခြေများသည် ထန်းလျက်. မန်ကျည်းသီးရည် အခြား သည်းခြတို့ကို အိတ်လုပ်ပြီး ထုပ်ကာ ညို့တပ်၍ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင်လုပ်၍ရောင်းချကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတို့ဖြင့် စပါးကြီး သည်းခြေ စစ် မစစ်ကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုနိုင်သောရောဂါ အချို့မျက်စိရောဂါခံတွင်းနဲ့ လည်ချောင်းရောဂါ သွားရောဂါ နားရောဂါနှာခေါင်းရောဂါ အရိုးစူးအရိုးမျက်သောရောဂါ
လေငန်းရောဂါ သူငယ်နာ အတက်ရောဂါဆီးရောဂါ တို့ဖြစ်ကြသည်။
၁ ) မျက်စိ့နာ
ကိုယ်တွေ့ စပါးကြီးသည်းခြေ၏ အာနိသင်
မသွားလျှင် မဖြစ်သော ခရီး တစ်ခုကို ကြုံလာသည်။နံနက် သွားရမည့်ဆဲဆဲ ညနေ၌မျက်စိသည် အောင့်လာသည်။ တင်းရောင်နီရဲ၍ မျက်ရည်ပူများ ကျလာသည်။
စပါးကြီးသည်းခြေကို သွေး၍ သုံးလေးကြိမ်ခန့် ခပ်များများ ခပ်လိုက်၏ ခပ်ပြီးချိန်၌ အနည်းငယ် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်၏ အလွန်စပ် ခြင်းကား မဖြစ်ပါ။ နောက်နေ့ နံနက် မျက်လုံး ပကတိအတိုင်း ကောင်းသွား၏
၂) မျက်လုံအတွင်း ကျောက်ပေါက်ခြင်း
မျက်စိ အတွင်း၌ ကျောက်ဝင်ပေါက်ခြင်းသည် ကျောက်ဆိုး တမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ မျက်စိထဲသို့ ဝင်ပေါက်သော မျက်လုံး ပျက်စီးရမည်သာ ဖြစ်သည်။
ကျောက်ကို ကုစားကာကွယ်သည်က လွယ်ကူသည်။ မျက်စိတွင် ကျောက်ဝင်ပေါက်လျှင်က ကုစားရန်မလွယ် ပျက်စီးရသည်သာ များပေသည်။
သို့သော် စပါးကြီးသည်းခြေ၏ စွမ်းအားအကူအညီနဲ့ မျက်စိထဲမှ ကျောက်ကို ကောင်းစွာ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
တွေ့ရဖူးသည့် ဝေဒနာရှင်မှာ အသက် ၅၀ကျောက်မပေါက်သင့်သော အရွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုအရွယ် ကျောက်ပေါက်လျှင် ကုစားရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တတ်သည်။
စပါးကြီး သည်းခြေကို လူနို့ရည့်နဲ့သွေးပြီး အကြိမ်ကြိမ် ခပ်ပေးခြင်းဖြင့် ထိုကျောက်သည် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားရလေသည်မျက်စိသည်လည်း အကောင်း အ
၃ ) ပိုးထိ၍ဆီးမသွားလျှင်
ပိုးထိ၍ ဆီးမသွားခဲ့သော စပါးကြီးသည်းခြေကို သွေးကာ ဆီးခုံနဲ့ ဝမ်းဗိုက် နောက်ကြောများကို လိမ်းသပ် ချ ပေးခြင်းဖြင့်ဆီးသွား‌‌နိုင်သည်။ (ဆီးသွားလျှင် မသေနိုင်တော့ )
၄ ) ငုတ်စူးလျှင် ငုတ်စူး၍ ကျန်နေသေ အနာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးထွက်လာမည်။
၅ ) ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါ ကိုယ်တခြမ်းသေရောဂါဖြစ်လျှင် ဖြစ်သောဘက်ကိုလိမ်း လျှာတို လေငန်းဖြစ်သော လျှာကိုလိမ်း၍ ဆွဲပေးပါ။
၆ ) မေးခိုင်သော် လျှာမှာ ပွတ်ပြီး မျိုချ။
၇ ) မေးရွဲ့နေသော် မေးကိုလိမ်း လက်ဖြင့်တည့်ကာပေး။
၈ ) လေငန်းဖြစ်သော် တောရှောက်မြစ်နဲ့ ရော၍လိမ်း
၉ ) ဆီးချိုဖြစ်လျှင် ဆီးခုံမှာလိမ်း
၁၀ ) ဆီးကျောက်တည်သော် ဆန်ဆေးရေနဲ့ သွေးသောက်
၁၁) မျက်စိနာသော် ကွင်းပေး
၁၂ ) ကိုယ်ပူလျှင် ရေတွင်စိမ်၍ သောက်
၁၃ ) ကလေးသူငယ်နာ ဖြစ်လျှင် လျှာမှာပွတ်ပေး
၁၄ ) လေးဖက်နာဖြစ်လျှင် ဆေးပန်းဥနှင့် သွေးလိမ်း
၁၅ ) ကိုယ်ဖောကိုယ်ရောင်လျှင် ယူကလစ် ခေါက်နဲ့သွေးလိမ်း
၁၆ ) အဆစ်အမြစ်ကိုက်သော် – ရှောက်ရည်နဲ့ရော စုတ်နဲ့ပေါက်
၁၇ ) ဇက်ကြောထိုး ဇက်ကြောတက်လျှင်ကွမ်းရွက်ရည်နှင့် သွေးလိမ်း
၁၈ ) ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မီးဖွားရခက်လျှင် ချက်ပေါ်တင်ပေး
၁၉ ) ဈေးရောင်းကောင်းလိုလျှင် စပါးကြီးသည်းခြေ အဖိုအမကို ချိန်ခွင်မှာချိတ်ခြင်းဈေးဗန်း. ဈေးတောင်းမှာ ထည့်၍ရောင်းလေ။
မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်သော မျက်စိနာခြင်း ,မျက်စိကျိန်းခြင်း မျက်စိမူန်စေခြင်း စသည်ရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့၌ ရေပြန် ရေသန့် သို့မဟုတ် နှင်းရည် တစ်ပုလင်းခန့်တွင် စပါးကြီးသည်းခြေ တစ်ရွေးခန့် ထည့်ဖျော်ထားပြီးမျက်စဉ်း ခပ်ပေးရသည်။
မျက်စိ အတွင်းတိမ် ရေတိမ်ရောဂါတို့၌ ခပ်ပျစ်ပျစ်သွေးပြီး မျက်စိအတွင်းသို့ ထည့်ပေးရသည်။
မျက်လုံးတိမ် မျက်လုံးဒါဏ် ဘေးကိုဆွဲ ဆိုသည်မှာ မျက်စိ မျက်လုံးကို မထိပဲ စပါးကြီး သည်းခြေဖြင့် အနီးကပ် နှာခေါင်းဘက်မှ အပြင် မျက်ထောင့်ဖက်သို့ ဆွဲဆွဲပေးပါ။
စပါးကြီးသည်းခြေဖြင့် စီမံဖော်ထုတ်ထားသည့် မည်သည့် မျက်ကွင်းဆေး( မျက်စဉ်းဆေး ) မဆို ရောဂါ တစုံတရာရောက်လာမှ မဟုတ်ပဲ ကြိုတင်ကာကွယ်မူအနေနဲ့ အသံးပြုနိုင်သည်။
စကားပြောဆို ခက်ခဲခြင်း အင်တာဗျူး ဖြေစရာရှိလျှင် ဖို မ ညိူ့တံ ( သို့ ) အစုံဆောင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မီးမဖွားနိုင်လျှင် ညိူ့ကြိုးကို ရင်ဆို့ပေါ် ကန့်လန့် ဖြတ်ထားပါ မွေးဖွားပြီးသည်နှင့် ညိူ့ကြိုးကို ပြန်သိမ်းပါ
ကလေး ရေချိုးပြီးသည့်တိုင် ပြန်မသိမ်းပါက ညိူ့ကြိုးများ ပြတ်တောက်သွားတတ်သည်ဟုဆိုသည်။
အပင်း သွင်းခြင်းကို ညိူ့ကြိုးဖြင့် ကုနည်း
ညိူ့ကြိုးတစ်ပင်ထဲမှ လက် ၃ လုံးခန့် ( လက်နှစ်ဆစ်ပိုပို ) ဖြတ်ယူ၍ အစာတခုခုနဲ့ရောကျွေး ( ကပ်ကျေးနဲ့ သေးသေးနုတ်နုတ်စင်းပြီး ရောနယ်ကျွေး ) အချို့က အစာနဲ့ ရောကျွေးသည်။
ရှိသမျှအပင်း အန်ထွက်လာမည် ဇလုံနဲ့ခံထားပါ ရှိသမျှ ဆံပင်ချည်မှအစ အစာအပင်း အားလုံး ထွက်လာမည်
လေဖြတ်သူကို စပါးကြီးသည်းခြေ အသုံးပြုပုံ
ရှောက်ရည် နဲ့ သည်းခြေ ( မီးခြစ်ဆံ ၅ ခေါင်းစာ ) လေဖြတ်သည့် ဘက် လက်မောင်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လက်ခလယ်လက်ချောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ဆွဲထား
လက်ခလယ် လက်တစ်ချောင်းကို လက်တစ်ဖက်နှင့် လိမ်းသူမှ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပုခုံးဆစ်မှနေ၍ လက်ကောက်ဝတ်အထိ ဆေးကိုလိမ်းအထက်မှ အောက်သို့ ပွတ်ဆွဲ
( လက်ချောင်းအားလုံးကို စုမကိုင်ရ လက်ခလယ်တချောင်းသာ ဆုပ်ကိုင် ဆွဲထားရမည် ) လက်ဖြင့်လျှင် လက်ခလယ်/ ခြေဖြစ်လျင် ခြေခလယ်ချောင်းကိုသာ ကိုင်ဆွဲရမည် ခြေချောင်း အားလုံး စုကိုင်ပြီး မလိမ်းရ။
စပါးကြီးအဆီ အသုံးပြုပုံ comments
စပါးကြီးအဆီကို တော့ယူနမ် နဲ့ ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးရင် အရိုးကျိုတာကို ပြန်ဆက်တယ် ( စပါးကြီး အဆီကို တစ်မျိုးတည်း မသုံးသင့်ပါ ဆွဲအားပြင်းသည်) အကြောနဲ့ပတ်သက်ရင် တော့ယူနမ် နဲ့ တွဲသုံးပါ။
သေနတ်ပြောင်းကို သုပ်ထားရင် သံချေးမတက်ပါ။
နောက်ထပ် အသုံးပြုနည်းများ ရှိပါသေးတယ်
ခံစားနေရသော ဝေဒနာများ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာကြပါစေ။
မြန်မာ့ အာယုဗ္ဗေဒ သိမ်ဖြူ ဆေးသိပ္ပံဆရာတော် ရေးသားသော အိုမွုဆိုင်ရာပြဿနာများ စာအုပ်မှ ကြိုတင်ကာကွယ် ဘေးမတွယ် အပိုင်း ( ၅ )
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on စပါးကြီးသည်းခြေရဲ့ ဆေးအစွမ်း
သူတို့ ဘာကြောင့် ကျန်းမာနေကြတာလဲခပ်နည်းနည်းပဲစားတဲ့ Style
အဲဒီ Styleလေးကခပ်နည်းနည်းပဲစားတဲ့ Style ဖြစ်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးသိပ်များပါတယ်။
အဲဒါသည်ကျနော်တို့အတွက်အမှားကြီးမှားနေတာပြဲဖစ်တယ်။လူတစ်ယောက်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်စားသင့်တဲ့အတိုင်းအတာကသူ့အစာအိမ်ပမာဏလောက်ပြဲဖစ်တယ် အစာအိမ်ပမာဏကဂရိတ်ဖရုသီးတစ်လုံးအတိုင်းအတာလောက်ပဲရှိတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်တစ်ခါစားရင်ဂရိတ်ဖရုသီးတစ်လုံးစာလောက်ပဲစားရမယ်။
အဲ့လိုမစားဘဲဗိုက်ကြီးပြဲကားအောင်စားနေကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကစားလိုက်တဲ့အစာတွေကြေညက်အောင်ချက်တဲ့အလုပ်ကိုပင်ပန်းစွာလုပ်ရပါတယ် အစာခြေရည်တွေအများကြီးထုတ်ရတယ်၊သည်းခြေရည်တွေထုတ်ရတယ်၊နှလုံးကလည်းပိုအလုပ်လုပ်ရတယ်၊ကျောက်ကပ်ကလည်းပိုဆေးရတယ်၊အသည်းကလည်းပိုပြီးအဆိပ်ဖြေပေးရတယ် အူတွေကလည်းအလုပ်ပိုလုပ်ရတယ် ကြာတော့ကလီစာတွေသိပ်ပင်ပန်းကြတယ် နှစ်ရှည်မခံတော့ဘူး။
စားသင့်တဲ့အတိုင်းအတာထက်ပိုစားတဲ့အစာတွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိဘူး ပိုတဲ့အစာတွေကအဆိပ်အပုပ်တွေဖြစ်သွားတယ် Free Radical တွေပိုထွက်လာစေတယ် ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေတာပဲအဖတ်တင်တယ် ဘာမှကိုအကျိုးမရှိဘူး
အစားကြူးတဲ့သူတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါ သူတို့ဟာရောဂါသိပ်များတယ် အစောကြီးသေကြတယ်ရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်းကြည့်ရဆိုးတယ် ဘဝအရည်အသွေးမကောင်းဘူးဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်
မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စားနေကျမြန်မာစာတွေကိုပဲသင့်ရုံစားသွားဖို့ပါပဲ အထွေအထူးပြောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူး၊စားမယ့်Meal potion amount ကိုသာသင့်ရုံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ဂရိတ်ဖရုတစ်လုံးစာလောက်ပေါ့ စားတာကအကုန်စားလို့ရတယ်နော် အဆီ၊အခေါက်၊အသား၊ကလီစာ၊အသီးအရွက်၊မြေအောက်ဥ၊ကောက်နှံ၊ပဲမျိုးစုံကြိုက်တာသာစား
Lunchစားမယ်ဗျာ ထမင်းတစ်လုံးအသားငါးဟင်း၂တုံး၊အရွက်ကြော်သင့်ရုံပေါ့ ခေါက်ဆွဲကြော်ထမင်းကြော်ဆိုရင်လည်းပွဲသေးပေါ့ ဆီချက်ဆိုလည်းတစ်ပွဲပေါ့ သင့်ရုံပဲ
Dinnerစားမယ်ဗျာ ဘိုစာဆိုလည်းတစ်ပွဲစာလောက်ပဲ ကြာဆံကြော်ဆိုလည်းတစ်လုံးလောက်ပဲကြက်သားpuffဆိုလည်း၂ခုလောက်ပေါ့ ဘာစားစားကြိုက်တာသာစားဗျာ၊အတိုင်းအတာကဂရိတ်ဖရုတစ်လုံးစာလောက်ပြဲဖစ်ရမယ် ဗိုက်ဆာရင်ရေသောက်ပေါ့
ဂရိတ်ဖရုတစ်လုံးစာလောက်ပဲစားရမယ်ဆိုတော့ဗိုက်ပြည့်ပါ့မလားပေါ့ အစာအိမ်ကသိပ်အံ့သြစရာကောင်းတယ် ဂရိတ်ဖရုတစ်လုံးစာလောက်ပဲစားတဲ့အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးရင်အစာအိမ်ကသူ့ဟာသူသေးသွားရောဗျ တစ်ပတ်ဆယ်ရက်တော့အချိန်ပေးပြီးစောင့်ရတယ် တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စားရတာတင်းတိမ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဆယ်ရက်လောက်မှာကျင့်သားရပြီးမဆာတော့ဘူး နည်းနည်းပိုစားမိရင်တောင်အစာအိမ်ကလက်မခံချင်တော့လောက်အောင်အကျင့်ကောင်းသွားပြီ အဲဒါဆိုအေးအေးဆေးဆေးပဲ
ရေကတော့Bodyရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းသောက်ပေးဖို့လိုတယ် ပေါင်၅၀ကိုတစ်လီတာနှုန်းနဲ့သောက်ရမယ် ပေါင်၁၅၀ဆိုရင်တစ်နေ့ကို၃လီတာအနည်းဆုံးပဲရေသောက်ရင်မနက်စောစောကလွဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့ခဏခဏသောက်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ် စားထားတဲ့အစာဟောင်းတွေအကုန်ပြန်ထုတ်ဖို့ကရေကိုပြည့်မီအောင်သောက်ဖို့လိုတယ်
အဲဒီလိုခပ်နည်းနည်းပဲစားတဲ့styleနဲ့သွားရင်Bodyကတဖြည်းဖြည့်းသွယ်လျလာလိမ့်မယ် ကိုယ်တွင်းမှာအဆိပ်အပုပ်တွေကင်းတဲ့အတွက်အသားရေကြည်လင်လှပလာလိမ့်မယ် ပေါ့ပါးသွက်လက်တက်ကြွလာလိမ့်မယ် မကောင်းတဲ့ကော်လက်စတြောတွေမရှိလို့မျက်နှာကအစ်ထစ်မနေတော့ဘဲပိုချောလာလိမ့်မယ် Bodyလှလာတဲ့အတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကလည်းအလိုလိုstyleကျနေလိမ့်မယ် ဉာဏ်ရည်လည်းကောင်းလာလို့လုပ်ငန်းလုပ်လို့ပိုအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ် တရားထိုင်ရတာလည်းသိပ်ကောင်းလိမ့်မယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုတွေတိုးလာလိမ့်မယ် မမျှော်မှန်းထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာတာကိုအံ့သြစွာကြုံလာရပါလိမ့်မယ်
ရန်ကုန်မြို့ကကြယ်၅ပွင့်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာဘူဖေးညစာသွားစားဖူးပါတယ် အဲ့မှာပြင်သစ်၂ယောက်ကိုတွေ့တယ် သူတို့ဘယ်လိုစားလည်းလေ့လာကြည့်တယ် အစားအစာတွေကိုပန်းကန်လှရုံပဲထည့်စားပြီးပြန်သွားကြတယ် ကျနော်တို့မြန်မာတွေကတော့ပန်းကန်အမောက်ကြီးတွေ၂ခါ၃ခါထပ်ထည့်စားပြီးဗိုက်ပြဲကားမှအိမ်ပြန်ကြပါတယ် အဲဒါကိုသတိထားမိတယ်
ကျနော်စင်္ကာပူမှာနေတုန်းကနေ့တိုင်းစားတဲ့ထမင်းဆိုင်ကတရုတ်လင်မယားကကျနော်စားတာကိုနေ့တိုင်းကြည့်နေကြတယ် ထမင်းကို၃ပန်းကန်လောက်စားတာကိုး ခြောက်လလောက်ကြာတော့သူတိ့နဲ့ခင်သွားတယ် သူတို့ကဘာပြောသလဲဆိုရင်မင်းအဲ့လောက်စားနေရင်ရောဂါတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့သင့်ရုံပဲစားတဲ့ ဟုတ်တယ်ဗျ၊စလုံးကလူတွေထမင်းတစ်လုံးပဲစားကြလို့ရောဂါကင်းပြီးသွယ်လျကြတာတွေ့ရတယ်
ကမ္ဘာကျော်မင်းသားမင်းသမီးတော်တော်များများဒီအတိုင်းခပ်နည်းနည်းစားတဲ့Styleကိုကျင့်သုံးနေကြတယ် ဘောလိဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်အရင်လိုဗိုက်မပူကြတော့ဘူးဗျ မြန်မာပြည်မှာလည်းကြည့် သာသနာရေးမှာဆိုရင်ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးပေါ့၊နိုင်ငံရေးလောကမှာဆိုအမေစုလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့၊အနုပညာလောကမှာဆိုလည်းဒါရိုက်တာဦးအောင်ကိုလတ်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့၊ပန်းချီဦးစိုးမိုးလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့၊စီးပွားရေးလောကမှာဆိုဦးမောင်ဝိတ်တို့လိုပေါ့ ဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းပြီးအောင်မြင်နေကြလဲဆိုတာ ဒါကထင်ရှားတဲ့သူအချို့ကိုပြောတာအခြားပြည်တွင်းပြည်ပကလူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်
ကဲ…မိတ်ဆွေများ….အခုကJanuaryလပေါ့ဗျာ အခုကစပြီးခပ်နည်းနည်းပဲစားတဲ့styleကိုလုပ်ကြည့်ကြမလား နောက်နှစ်January ဒီအချိန်လေးမှာအဖြေထုတ်ကြည့်ကြမယ် တကယ်ဖြစ်ချင်ရင်တကယ်လုပ်အဟုတ်ဖြစ်ရမည်တဲ့ နေမကောင်းဘူးဆိုတာမရှိစေရ ကျန်းမာပြီးရောဂါကင်းတဲ့ဘဝ၊သွယ်လျပြီးလှပတဲ့ဘဝ၊တိုးတက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ဘဝ၊စိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုတကယ်လိုချင်သူတွေအတွက်
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on သူတို့ ဘာကြောင့် ကျန်းမာနေကြတာလဲခပ်နည်းနည်းပဲစားတဲ့ Style
နေ့ရက်အလိုက် မေတ္တာသုတ်ကို စနစ်တကျ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း
ပုံမှန်ဆိုရင် မေတ္တာသုတ်ကို မနက် (၃)ခေါက် ည (၃)ခေါက် ပူဇော်ပါတယ် အခု အဓိဌာန်တခုအနေနဲ့ ရွတ်မယ့် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံရွတ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို အားလုံးနဲ့အတူ ကုသိုလ်ယူ ပူဇော်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ…။ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံ နည်းစနစ် တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သက် ၆။ တနင်္လာဂြိုလ်သက် ၁၅။ အင်္ဂါဂြိုလ်သက် ၈။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သက် ၁၇။ စနေဂြိုလ်သက် ၁၀။ ကြာသပတေးဂြိုလ်သက် ၁၉။ ရာဟုဂြိုလ်သက် ၁၂။ သောကြာဂြိုလ်သက် ၂၁။ (စုစုပေါင်းဂြိုလ်သက် ၁၀၈)
၁။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ-“တနင်္ဂနွေဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အရှေ့မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ”……ဟူ၍ စတင်ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၆ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၂။ တနင်္လာနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ-“တနင်္လာဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ တနင်္လာသားသမီးများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အရှေ့အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင်ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၅ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၃။ အင်္ဂါနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ- “အင်္ဂါဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ အင်္ဂါသားသမီးများအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အရှေ့တောင်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ် သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၈ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၄။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်အာရုံတက်မှ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ မထိုးမီ- စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ-“ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ တောင်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၇ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၅။ ရာဟုဂြိုလ်အတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအတွင်း၊ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ-“ရာဟုဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ ရာဟု သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အနောက်မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၂ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၆။ ကြာသပတေးနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ- “ကြာသပတေးဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ ကြာသပတေး သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အနောက်အရပ်၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၉ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၇။ သောကြာနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ- “သောကြာဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ သောကြာသားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ မြောက်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၂၁ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
၈။ စနေ့မှာ စရွတ်လျှင် မရွတ်မှီ- “စနေဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ စနေ သားသမီးများအားလုံး၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စောင့်နတ်များအားလုံး၊ အနောက်တောင်အရပ်၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ်များအားလုံး ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ.. ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ”….ဟူ၍ စတင် ရွတ်ဆိုပြီးမှ မေတ္တာသုတ်ကို ၁၀ ခေါက် စပြီးရွတ်ပါ၊ ပြီးလျှင် သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ၁။ ကြိုက်ရာနေ့မှာ အထက်ပါအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာနေ့၏ ဂြိုလ်သက်အတိုင်း စတင်ရွတ်ဆိုနိူင်ပါသည်။ ၂။ တစ်နေ့ခြင်းလည်း ရွတ်နိူင်ပါသည်။ ၃။ တစ်နေ့တည်း ဂြိုလ်သက်စုံအောင် ရွတ်ဆိုနိူင်ပါကလည်း စသည့်နေ့၊ စသည့်ဂြိုလ်မှ ဆုံးအောင်၊ ၁၀၈ ခေါက်ပြည့်အောင် ရွတ်ဆိုနိူင်ပါသည်။ ၄။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ မထိုးမီ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက် အပြီးရွတ်၍ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ရာဟုဂြိုလ်အတွက် ရွတ်ပေးရပါမည်။ ၅။ ရန်ဖြစ်စရာကိစ္စများ၊ စကားအခြေအတင် ပြောရခြင်းများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အစမ်းသပ်ခံရပါလိမ့်မည်။ ၆။ မေတ္တာဖြင့် သည်းခံပြီး ရှောင်ရှားပေးခြင်း၊ ပြန်မပြောခြင်းဖြင့် ရန်ကိုရှောင်ရပါမည်။ ၇။ ပြိုင်လာလျှင် အရှုံးပေးခြင်း နည်းကိုသာ ရွေးချယ်ရပါမည်။ ၈။ ဤမေတ္တာကျင့်စဉ်မှာ အစမ်းသပ်ခံရပြီးမှသာလျှင် အဆင့်တက်မည်ဖြစ်၍ သတိထားပြီး ရန်ကိုရှောင်ပေးပါ။
၉။ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးမျာမှာ-(၁) မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဆိုမည့် ရှေ့တည့်တည့်တွင် သောက်ရေထား၍ မောသည့်အခါ ထိုရေကို သောက်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်ဘေး ပယောဂရောဂါဆိုးများမှ မကျရောက်နိူင်တော့ပါ။ (၂) ၄၅ ရက် အတွင်းမှာပင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ စတင်ပေါ်ပေါက်တတ်ပါသည်။ (၃) ဆက်လက် ကျင့်ကြံနိူင်ပါက ၃ နှစ်အတွင်း ယခုဘဝ တစ်သက်စာအတွက် စားဝတ်နေရေးကိစ္စများအတွက် မပူမပင် မကြောင့်မကြမတောင့်တရဘဲ အားလုံးပြည့်စုံပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ (၄) ရွတ်ဆဲကာလ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ရွတ်ဆို၍ အလွန်ကောင်းမွန်လာပြီး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာ၍ စတုတ္တဈာန်အဆင့်ကိုပင် ရရှိနိူင်ပါသည်။ (၅) ထိုမှတစ်ဆင့် ဝိပဿနာကူး၍ အားထုတ်ခဲ့ပါက လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တရားထူးတရားမြတ်ကို သေချာပေါက် ရရှိနိူင်ပါသည်။
Posted in သတင္း LeaveaComment on နေ့ရက်အလိုက် မေတ္တာသုတ်ကို စနစ်တကျ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ရှောက်ရွက်နှင့်ကျန်းမာရေး(အဆီကျဆေး)
Covax အစီအစဉ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တိုင်းပြည်တွေကို ကာကွယ်ဆေးမျှဝေပေးဖို့အတွက် ကူညီပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြုံယမ်းအနေနဲ့ ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်း AstraZenca ကာကွယ်ဆေးပေါင်း ၂ သန်းနီးပါးကိုလည်း ငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးပြီး ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ Sputnik ကာကွယ်ဆေးကူညီဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်း ပယ်ချခဲ့ပါသေးတယ်။
WHO ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ကိုဗစ်ကူးစက်သူရှိကြောင်း ကြေညာမှုလုံးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီး မြောက်ကိုရီးယားဟာ နယ်စပ်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး သွားလာမှုတွေကိုလည်း ကန့်သတ်ပြီး ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Crd, The River News
Posted in သတင္း LeaveaComment on တရုတ်က ပေးပို့မယ့် ကာကွယ်ဆေး ၃ သန်းကို မြောက်ကိုရီးယားငြင်းဆန်